musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » 60% yevaAmerica Vanoti Masiki Ari Pano Kuti Agare
Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
MaRepublicans anga achitungamira mhosva yekudzoreredza masisitandi emasikisi, kunyangwe kuvhota kuchiratidzira kuratidza mugove wakaringana wekutsigira masiki kumativi ese enzira yezvematongerwo enyika, vanopfuura hafu yevaRepublican vachiti vachazvivhara kana vachirwara, nepo makumi masere % yeDemocrat akataura zvakafanana.
67% yevaAmerica vanoronga kushandisa masiki mune veruzhinji kana vachinzwa kurwara.
MaAmerican mazhinji anoda kuenderera nekuvimba nemasiki, kunyangwe mune yepashure-chirwere.
Vanopfuura makumi mana muzana vevanhu vekuAmerica vanoti vachapfeka mamask mu "nzvimbo dzine vanhu" kunyangwe mushure mekupararira kwedenda.
Sekureva kwesarudzo nyowani yakaitwa neSchar Chikoro chePolisi neHurumende pa George Mason University, maAmerican mazhinji anoda kuenderera nekuvimba nemasiki, kunyangwe mune yepashure-denda renyika.
Ipo pakavandudzwa maski mvumo uye yakagadziridzwa nhungamiro kubva ku Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vagamuchira zvinorema kudzoserwa kubva kuvatsoropodzi, ongororo nyowani yakawana kuti zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevaAmerican vacharamba vachizvifukidza kana vachinzwa kurwara, mushure mechirwere checoronavirus, uye vanopfuura makumi mana muzana vachapfekedza kumeso munzvimbo 'dzakazara vanhu' kunyangwe post-COVID-40.
Sekureva kwesarudzo, yakaburitswa nezuro, 67% yevaAmerica vanoronga kushandisa mamask paruzhinji kana vachinzwa kurwara. Pakutanga kwedenda muchirimo chegore rapfuura, rairo rekutanga reCDC pamasikisi raive rekungopfeka rimwe chete kana uchinzwa zviratidzo zvecoronavirus. Ivo kubva ipapo vadzora yavo masiki nhungamiro kune vakabaiwa maAmerican, uye vobva vadzokorora iwo iwo mazano ekuti masiki anodikanwa, kunyangwe kune vakabaiwa, mune izvo zvavanofunga kunge nzvimbo dzine njodzi huru.
Vanopfuura makumi matatu muzana yevakabvunzwa vakati vanozozvivhara kana vachirwara kana nyika yapfuura nedenda. Vanopfuura makumi mashanu muzana vakatiwo havangapfekedze kumeso munzvimbo dzakazara vanhu, chimwe chinhu vakuru vehutano vakakurudzira dzimwe nguva, kunyanya kunzvimbo dzemukati, nekuda kwekuwedzera kwezviitiko kutenderera nyika uye nekupararira kwemusiyano wedelta.
Vanopfuura makumi mana muzana, zvisinei, vanoti vachapfeka masiki mu "nzvimbo dzine vanhu" kunyangwe mushure mekupararira kwedenda.
Musiyano uripo pakati pehukama hwezvematongerwo enyika wakaratidza zvakawanda mukubvunza kuti hupenyu hwevapinduri hwainge "hwadzokera pane zvakajairika" zvakadaro, nenzvimbo dzakawanda nenzvimbo dzichidzora zvirambidzo nekuvhurira bhizinesi zvekare.
Chete 15% yeavo vanozvitsanangudza maDemocrats vakati hupenyu hwavo "hwadzoka zvizere kune zvakajairwa," zvichienzaniswa ne48% yevaRepublican. Vanopfuura makumi mana muzana maDemocrat vanotenda kuti hupenyu hwavo huchaenderera mberi kubva padenda mugore rinotevera, nepo makumi maviri muzana vachidavira mimwe mwedzi mitatu chete inodiwa. MaRepublicans angangodaro, maererano neongororo, kuti vakapinda musangano wakawanda wevanhu mukati megore idzva kupfuura maDemocrat, mazhinji acho anoramba achitya kuwanda kwemitero yekudzivirira uye zvakasiyana.
Kuvhota kwakaitwa pakati pevanhu vakuru chiuru uye ine marginal yekukanganisa kwekuwedzera kana kubvisa 1,000%.
Vashandi vehutano vakapedza masvondo apfuura vachikurudzira majekiseni uye kunyeverwa kwekuwanda kweacoronavirus kesi mukudonha. Anthony Fauci, chipangamazano mukuru wezvekurapa kuMutungamiri Joe Biden, akayambira vhiki rino kuti anotenda kuti macoronavirus kesi anokwanisa kusvika mazana maviri ezviuru pazuva.
IUS ine mazuva manomwe anofambisa avhareji angangoita 90,000 mitsva mitsva svondo rino, sekureva kweJohns Hopkins University data, iri pamusoro pe30% kumusoro kupfuura avhareji yemazuva manomwe apfuura.